Zawgyi Keyboard layout for Mac - MYSTERY ZILLION
October 2012 edited October 2012 in Mac
Can someone tell me where I can find Zawgyi Keyboard layout foraMacBook Pro?
I just installed Tharlon file and Keymagic 1.5 thanks to your help. But..I am still missing some words which have to be typed with "hot key".
I will never hesitate to recommend to anyone about this site. You guys are all awesome and there arealot of inputs.
ဒီလင့်ခ်မှာ ပြထားတဲ့ Keyboard Layout ကိုတော့ ကျနော်တွေ့ဖူးပါတယ်၊ အဓိကသိချင်တာက Mac မှာ ပဌ်ဆင့်တွေကို ဘယ်ကီးနဲ့ တွဲရိုက်ရမလဲလို့ သိချင်တာဗျ၊
Mac KB မှာက ဝင်းဒိုးမှာလို Dead Key မပါတော့ ပဌ်ဆင့်၊ ၌၊ ဤ စတာတွေကို ရိုက်ဖို့ တွဲရမယ့် ခလုတ်အတွဲကို သိချင်တာပါ၊ နည်းနည်းပါးပါး ရှာလိုက်တာ အခုတော့
သိသွားပါပြီ၊ ဒီလင့်ခ်မှာ သေချာရှင်းပြ ထားတယ်ဗျ..၊
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလို ကူညီတာ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ဗျာ..။